Uhambo lokuqala kwiHyperloop lusondele kunokuba bekulindelwe | Iindaba zeGajethi
Kwiveki ephelileyo uElon Musk kunye neqela lakhe bapapasha kwividiyo uvavanyo lokuqala oluyimpumelelo lwezothutho lwabo lwexesha elizayo, iHyperloop. Nangona kunjalo, I-CEO yeenkampani ezinje ngeTesla, SpaceX okanye Inkampani edinayo yenze isibhengezo esibaluleke kakhulu ngeakhawunti yakho ye-Twitter.
Uvavanyo lokuqala lwe-Hyperloop oluphumeleleyo lwenzeka ngoMeyi ophelileyo. Nangona kunjalo, ayifikanga nge-12 kaJulayi ngohlobo lwevidiyo. Uvavanyo beluquka ukuvavanywa kwazo zonke izinto ekufuneka zithwalwe yicapsule yaseburhulumenteni. Esona santya siphezulu safikelelwa kwi-116 km / h kwimizuzwana emi-5. Eli nani yinto ekude lee naleyo yabhengezwa ephepheni ngu-Elon Musk. Isantya ofuna ukufikelela kuso yi-1.200 km / h (700 mph).
Ngoku, emva kovavanyo lokuqala Kuqinisekisiwe ukuba zombini inkqubo yokubuyisa, inkqubo yokuqhubela phambili kunye netyhubhu yokucoca isebenze ngokugqibeleleyo. Inyathelo elilandelayo iya kuba kukufaka yonke into ephunyeziweyo kwimodeli esekwe kwi-capsule yokwenyani.
Nangona kunjalo, njengoko besesitshilo, u-Elon Musk akakwazanga ukuluma ulwimi. Kufuneka iqatshelwe ukuba uyasebenza kakhulu kwinethiwekhi yoluntu, ngakumbi ngokubhekisele kwi-Twitter. Kwaye ke, kuqhelekile ukufumana iintloko ngeengxelo zakho. Umyalezo wakutshanje obhekisa kwiHyperloop kukuba ufumene imvume yomlomo kuRhulumente yokwakha itonela edibanisa iNew York neWashington DC. Eli tonela liza kumbiwa yenye inkampani i-Boring Company. Kwaye kuyakwenzeka ukudibanisa zombini izixeko ngemizuzu nje engama-29.
Emva kwesi sibhengezo sebhombu, imibuzo khange kube kudala iza. Kwaye uElon Musk kuye kwafuneka abhale kwakhona kwiakhawunti yakhe ye-Twitter. Ngeli xesha kuye kwafuneka akuchaze oko Isivumelwano sisekude ekubeni sesikweni ngokubhalwa. Nangona kunjalo, kwaye uyakholelwa ukuba ixesha liya kuba lifutshane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Uhambo lokuqala kwiHyperloop lusondele kunokuba bekulindelwe